Izindaba - "Ukuhlolwa kwe-antigen okusheshayo kwe-COVID-19 (i-Colloidal Gold)" yi-JBT ukuthola ukuqinisekiswa okuvela ku-PEI Germany kanye nokufaneleka kwabagunyaziwe bokuthekelisa ngempumelelo
"I-COVID-19 test antigen test (Colloidal Gold)" eyenziwe yi-JBT ithola isiqinisekiso esivela e-PEI Germany kanye neziqu zokugunyazwa kokuthekelisa ngempumelelo
01. I-COVID-19 Antigen Schnelltest (Colloidal Gold) eyenziwe yiJoinstar Biomedical Technology ithole ukuqinisekiswa kokusebenza esikhungweni sePaul Ehrlich. Ngokubambisana no-Abbott, Roche, SD, BD, Siemens LumiraDX, kanye nezinye izinkampani ezaziwa umhlaba wonke, i-Joinstar Biomedical Technology yaba ngomunye wabakhiqizi be-antigen abavunyelwe yi-PEI eqenjini lokuqala emhlabeni jikelele.
“UPaul-ehrlich-institut” (PEI) umele isikhungo sikahulumeni saseJalimane semithi yokugoma neBiomedicine, esibhekele isikhungo socwaningo lwezokwelapha kanye ne-ejensi yokulawula. I-PEI futhi iyisiphathimandla esiphezulu esibika eMnyangweni Wezempilo waseFederal, isikhungo sokubambisana ekuqinisekisweni kwekhwalithi yemikhiqizo yegazi ye-WHO kanye nemishini yokuxilonga i-vitro. Ibizwa ngegama lomqondisi wayo owasungula, udokotela wezifo zomzimba kanye nowathola indondo kaNobel, uPaul Ehrlich.
02. Mayelana nokuhlolwa kwe-antigen okusheshayo
Kungani sidinga ukuhlolwa kwe-antigen okusheshayo?
I-Antigen isho into engakhiqiza amasosha omzimba, yinoma yini engadala ukuphendula komzimba. Ukuhlolwa kwe-antigen kungasetshenziswa esigabeni sokuqala sesifo (ngemuva kokuqala kwezimpawu zingakapheli izinsuku eziyi-1-5 noma ngisho nangesikhathi sokufukamela) ukuthola imiphumela emihle. Indlela yokuthola i-antigen ifaneleka kakhulu ekuphenyweni okubucayi kwesikhathi kwamacala asolwayo okutheleleka nge-coronavirus enkulu futhi iyasebenza kakhulu ezindaweni ezinokuqubuka okugxile. Ngokuya ngesimo esinzima futhi esiyinkimbinkimbi, i-WHO, i-FIND nezinye izinhlangano zomhlaba wonke zikhuthaza ukutholwa kwe-Antigen njengezindlela eziphumelelayo.
Kubandakanya i-UK, iFrance, iSlovakia, iSlovenia, iGeorgia, namanye amazwe amaningi aseqalile ukuthenga nokusebenzisa i-Antigen Rapid Test ezindaweni eziningi zokubuthana kwabantu.
Isivivinyo se-COVID-19 Antigen Rapid (Colloidal Gold)
i-nasopharyngeal swab njengesampula
Ukuzwela okuphezulu nokucaciswa
Isikhathi esifushane samawindi, thola izifo kusigaba sokuqala kanye nesikhathi sokufukamela, ezilusizo ekuhlolweni kokuqala. Ukuxilongwa kwangaphambilini kuletha ukwelashwa okungcono.
Kusebenza kuzimo ezahlukahlukene: izikhungo eziqokiwe (njengezibhedlela); ukuqala kabusha komsebenzi nesikole, ukuqapha okuqhubekayo kwezimo ezintsha ze-coronary, njll.;
Indlela yesinyathelo esisodwa, elula ukusebenza, ukunciphisa ukutholwa okungabanjwanga nokutholwa kwephutha okubangelwa amaphutha okusebenza;
Nikeza isethi ephelele yama-reagents nezinto ezisetshenziswayo ezidingekayo ukuze kuhlolwe; ayikho imishini edingekayo;
Ukusebenza okusheshayo, imiphumela kumaminithi we-10-15;
Ukushisa kwesitoreji: 2 ~ 30 ℃, asikho isidingo sokuhamba ngamaketanga abandayo;
Ukucaciswa okungakhethwa: ama-servings angama-25 / ibhokisi, ukukhonza okungu-1 / ibhokisi;
Izindlela eziningi zokubambisana, ukwamukela i-OEM / ODM
04. Isiqu esitholiwe:
Ukunikezwa isitifiketi kwe-CE, ukugunyaza ukuthekelisa eMnyangweni Wezohwebo
Kubhalwe ohlwini lwe-EU coronavirus solution solution solution, efakwe kuhlu yi-WHO-FIND Innovation Foundation, futhi yadlulisa ukuhlolwa kwe-PEI yaseJalimane,
Isitifiketi sokubhalisa seJalimane ne-Italy